Blog Articles – Page 6 – Gender and Media Connect
Zimbabwe’s harmonised election comes at a time when women in the country are seeking to increase their participation and inclusion in decision-making positions in political parties and government structures. At the beginning of this year, the women’s movement launched the 50-50-advocacy campaign for gender parity...	Read More >>
Zimbabwe is right in the middle of an election campaign -- often regarded as “silly season”-- when politicians out to grab or retain power can resort to unverifiable, wild, trivial, irrelevant, and even false claims. During campaigns politicians feel the urge to promise the electorate...	Read More >>
Previous elections held in 2008 and 2013 have been marred by cases of political violence that include intimidation, rape and torture of both voters and candidates alike. It is this past experience of elections that accounts for the youths and especially young women not taking...	Read More >>
Following the announcement that Zimbabwe’s election will be held in July this year, there are concerns that this election may not be free and fair as expected because of intimidation of especially the rural voter. According to Heal Zimbabwe Human Rights Report of 2017 Mutasa...	Read More >>
The sudden interest politics by young people, and specifically young women, is both exciting and electrifying. Young people below the age of 40 make up 60% of registered voters in Zimbabwe, a significant change from previous elections when especially young urbanites never bothered to register....	Read More >>